समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्छौँँ, छलफल जारी छ : महेन्द्र राय यादव – रिपोर्टर्स नेपाल
समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्छौँँ, छलफल जारी छ : महेन्द्र राय यादव
२०७६ बैशाख २४ गते प्रकाशित, l १०:१२
महेन्द्र राय यादव, नेता, राजपा
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीचको एकतापछि अब सबैको ध्यान राजपातिर छ । यसअघि राजपा र फोरमबीच एकता गर्ने चर्चा धेरै चल्यो । तर फोरमले नयाँ शक्तिसँग एकीकरण गरेपछि राजपा के गर्छ भन्ने चासो बढेको छ । यसै सन्दर्भमा ऋषि धमलाले राजपाका नेता महेन्द्र राय यादवसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
समाजवादी पार्टीमा राजपा किन मिल्न सकेन ?
छलफल भइरहेको छ । अहिले पर्याप्त छलफलको लागि समय पुगेन । एकताका लागि हाम्रो चाहना छ । नेपाली जनताले पनि चाहेका छन् । देशको पनि आवश्यकता हो ।
जनताले किन चाहेका छन् ?
विभेदमा पारिएका जनताका लागि हाम्रो एकताको आवश्यकता छ । अहिले नेकपा र कांग्रेस मिलेर ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेर दुई दलीय व्यवस्था लागु गर्न खोजेका छन् । त्यसैले पनि हामीहरु मिल्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो पार्टीले आधिकारिक रुपमा नै पार्टी एकताको निर्णय गरिसकेको छ ।
समाजवादीले त अब ११ प्रदेशको माग गरिसक्यो । त्यसमा तपाईहरु सहमत हुनुहुन्छ ?
राज्य पुर्नसंरचनाको माग त हाम्रो पनि हो नि । सिमांकनमा हाम्रो विमति छ भनेर संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छौँ ।
संविधान त स्वीकार गरिसक्नुभयो नि । अब संशोधनको माग किन ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ । तर असहमतिका बुँदा त संशोधन हुनुपर्यो नि । हामीले अघि सारेको राजनीतिक मुद्धामा सहमति भएन भने त समस्या झन बल्झिन्छ नि ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार विकास र समृद्धिका लागि अघि बढिरहेको छ । तपाईहरु किन बाधा पु¥याउन खोज्नुहुन्छ ?
विगतमा पनि सरकारको घमण्डका कारण देशमा समस्या आइरह्यो । माओवादी जनयुद्ध जन्मियो । अब पनि त्यस्तै घमण्ड देखाउने हो भने समस्या बढ्दै जान्छ । जुन प्रकारले यो सरकारमा पनि दम्भ र घमण्ड देखिएको छ, त्यसले मुलुकमा अशान्ती पैदा गर्छ । अस्थिरता बढ्दै जाने र सुशासन कायम नहुने समस्या देखापर्न सक्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुभएन ? अब देशमा अरु केही समस्या छैन । समृद्धि र विकास नै एजेण्डा हो भनिएको छ ।
परम्परावादी नीति तथा कार्यक्रम न हो । के छ र परिवर्तन ? हेर्दा मात्रै राम्रो भएर हुँदैन । चालु आर्थिक वर्षको खर्चको अवस्था दयनीय छ ।